Ụbọchị My Pet » Top 5 US Cities maka Single Men
E nwere ụfọdụ ndị US obodo ebe otu ikom na-ele ndị ọzọ mfe karịa ndị ọzọ. Na mkparịta ụka a bụ banyere ise aha n'elu na ndepụta nke obodo ndị. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị bụ otu nwoke na-achọ nkwadobe ịkwagharị, a, dee-elu ga-n'ezie na-bara uru na-agụ gị; ma ọ bụrụ na ị na-ama na otu n'ime obodo ndị a, tụlee onwe gị kechioma.
1. New York City: Obodo a abụghị nanị mba nnukwu mepere ebe, ma ọ bụ otu n'ime ndị kasị iconic ebe n'ụwa. Obodo n'elu ndepụta a nke kacha mma US obodo maka otu ndị ikom bụ isi n'ihi na ruru alụghị ikom na ndị inyom na ya. N'ihi na ọ bụla 100 abụghị di na nwunye ndị ikom, obodo nwere 125 abụghị di na nwunye ndị inyom; otú, otu ndị na-New York City mgbe niile nwere nza nke nhọrọ dị ka ịhọrọ site na mgbe ọ na-abịa buru mmekọ.
Ọtụtụ mgbe kọwara dị ka “obodo na mgbe na-ehi ụra”, New York City ụlọ otutu nhọrọ ịhọrọ site na ọbụna mgbe ọ na-abịa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ọnọdụ. Ị nwere ike ezumike na Central Park ma ọ bụ nwere ike ịpụ na-emefu a mara mma mgbede na a posh osisi (obodo nwere nnọọ ole na ole n'ime ha).
2. Bismarck: Single ndị ikom na-achọ dajụọ pụrụ ịtụle akwaga ebe ka Bismarck, bụ isi obodo nke ala nke North Dakota. Ọ bụ ezie na redundancy bụ ugbu a a nnukwu nke na America ya n'ozuzu ya na-enweghị ọrụ ọnụego ezobe gburugburu 5.6 %, enweghị ọrụ ọnụego n'obodo a bụ nanị 2.8%.
Na mgbakwunye, n'ihi na nghọta na-anọkọ na ndị inyom, obodo nwere ọtụtụ na-ekpo ọkụ tụrụ, nke na-agụnye pubs, n'abalị klọb na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Bismarck na-enye ohere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmiri; ị pụrụ gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ibe maka a ụgbọ mmiri siri na McDowell mmiri e gbochiri egbochi Nature Park.
Ndị ikom na-n'anya biking, n'akụkụ aka nke ọzọ, nwere ike iso na-biking ụzọ ụkwụ tinyere mben Missouri River.
3. Washington D.C.: Ọ bụrụ na ị bụ onye na-oké ọchịchọ otu nwoke, na US isi obodo bụ ebe unu bụ ndị na-. Obodo ụlọ a ọnụ ọgụgụ nke akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị nkiri na bụ ebe otu nwaanyị ọtụtụ karịa otu mmadụ.
Mgbe Washington D.C., ị ga-enweta a plethora nke nhọrọ ọbụna mgbe achọ a ụbọchị ntụpọ. Ị nwere ike gị na onye òtù ọlụlụ nke a ụgbọ mmiri siri na Amrafel bezin, nwere ike ịga na National Ogige Anụmanụ, ma ọ bụ na-emefu a mma mgbede na akụkọ ihe mere eme Jazz oriri na nkwari abalị The Bohemia Caverns. Ndị a bụ nanị ole na ole nhọrọ ndị ị na-enwe; ị ga-ahụ ọtụtụ ihe mgbe ị na-na obodo.
4. Philadelphia: The akụkọ ihe mere eme mkpesa nke obodo a na-eme ka ọ na-anọ entrant na ndepụta a. The mma otu ndị mmadụ na-alụbeghị di inyom ruru bụ ihe ọzọ ime Philadelphia otu n'ime n'elu 5 obodo maka otu ndị ikom.
Akpa ke Philadelphia bụ oké ahụmahụ bụghị naanị n'ihi na nke saịtị dị ka Fairmount Park, Philadelphia Museum nke Art, Ortlieb si Jazzhaus na na, na ihu igwe nke obodo bụkwa maka-eme ka ọ a dater si paradise. All ụbọchị ndị anwụ na-acha ụbọchị Philadelphia.
5. Miami: The oseose nightlife nke na-eme ka ọ na-a obodo ukwu nke obibi otu ndị ikom. The ala na-eri nke ndụ na ọnụnọ nke ọzọ otu inyom karịa mmadụ abụọ ndị ọzọ na isi ihe na-mere Miami ikpeazụ entrant nke a ndepụta.
Onye ọ bụla n'ime ndị a obodo ise ga-ekwe ka otu ndị ikom nwere a na-eme ndụ. Ya mere, ọ bụ kpam kpam gị onye nke ị na-ahọrọ nkwadobe ịkwagharị ka.